On-Line Discussion - MYSTERY ZILLION
November 2009 edited March 2011 in Member ဆိုင်ရာ
ဖိုရမ်ဆိုတော့ မေးတာနဲ့ဖြေတာရှိရင်ပဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထားကတော့ ဖိုရမ်အနေအထားမဟုတ်တဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ ဖတ်စရာမှတ်စရာမှာ ရေးတဲ့စာတွေလည်းအကျိုးရှိပါတယ်။ စာသင်တဲ့ကိစ္စကတော့ ပုံမှန်မသင်နိုင်ကြပေမယ့် edu လည်းသတ်သတ်ရှိပါတယ်။ နည်းနည်းစဉ်းစားမိတာက ရုံးပိတ်ရက်တိုင်း အရင်ကတော့ လူစုပြီးစကားပြောပြီး Discussion လုပ်တတ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ ကိုသာသာ၊ MrDBA ကတော့ ပုံမှန်ပါလာတတ်ပါတယ် အခုတော့ Saturngod နဲ့လည်း ရံဖန်ရံခါတွေ့တော့ စုမိတဲ့လူတွေ Discussion လုပ်ကြပါတယ် လူအကုန်ချိန်းဖို့ကလည်း ပြောရန်လွယ်ပေမယ့် တစ်ကယ်ကတော့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ တစ်နိုင်ငံတည်း တစ်မြို့တည်းဖြစ်မှသာ စုလို့ရပါတယ်။ အရေးကြီးတာက ပြောပြီးတဲ့စကားတွေက လေထဲတင်ပျောက်ပါတယ်။ Facebook က Comment တွေကို Saturngod ဒီဘက်ကိုသယ်လာပြီး Thread ဖွင့်ထားတာတွေ့လို့ အကြံရတာက လူစုဖို့မလွယ်တဲ့အတူတူ တစ်ပါတ်တစ်ခါလောက် On-Line Discussion လုပ်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားမိပါတယ် စကားပြောတာမဟုတ်ပဲ On-Line ဆိုတော့ ဆွေးနွေးထားတာတွေ ပြန်တင်မယ်ဆိုတော့လည်း စုစည်းရတာလွယ်တာပေါ့။
ဆွေးနွေးဖို့အတွက် လူတိုင်းလည်းအမြဲလာနိုင်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါဘူး အနည်းဆုံး သုံးလေးယောက်လောက် ဆွေးနွေးတယ်ဆိုရင်ပဲ မဆိုးပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်မအားလို့ မလာနိုင်တာနဲ့ လျော့တွက်ရင် အနည်းဆုံးလူ ၁၀ လောက်လောက် အမာခံရှိရင် ပုံမှန်တော့ ၃ ယောက်လောက် လေကန်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ လိုင်းပေါင်းစုံကျွမ်းကျင်သမျှလည်း လူအစုံမစုနိုင်ပါဘူး ဒါ့ကြောင့် တစ်ယောက်တည်းကို ဒိုင်ခံပြောခိုင်းတာထက် လူအစုလိုက် လေ့လာနိုင်စွမ်းကိုတွန်းအားပေးတဲ့ အနေအထားကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကို ကြိုပြီးကြေငြာထားပြီး ဆွေးနွေးမယ့်လူများက ဘာတွေဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာ ပြင်ဆင်ပြီးမှာ ဆွေးနွေးမယ့်ရက်မှာ စုပေါင်းဆွေးနွေးကြတာမျိုးဆိုလိုပါတယ်။ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လိုင်းမဟုတ်လည်း အချိန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ရှာပြီးဖတ်ချိန်ရပါတယ် သူဖတ်တာနဲ့ကိုယ်ဖတ်တာ မတူတဲ့အတွက် ဆွေးနွေးပွဲမှာ အားလုံးစုပေါင်းလိုက်သလို ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အချိန်နည်းနည်းအတွင်းမှာ စာအများကြီးဖတ်လိုက်သလို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာ နည်းနည်းအကြံပြုကြည့်ပါမယ် ပိုကောင်းမယ့်အကြံဉာဏ်များလည်း ပေးကြပါဦး မသင့်လျော်တာများရှိရင်လည်းပြောကြပါဦး။
၁) ခေါင်းစဉ်ကိုကြိုတင်ကြေငြာပါမည်။ ဖြစ်နိုင်လျင် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု နောက်ဆုံးတွင် နောက်ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ခေါင်းစဉ်ကိုစဉ်းစားပြီး ကြေငြာရန်
၂) ခေါင်းစဉ်များသည် ဆွေးနွေးရန် သင့်လျော်သော ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရန်။ ဥပမာ Software Engineering ဆိုသောခေါင်းစဉ်မျိုးသည် ဆွေးနွေးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ Framework များသုံးခြင်းကြောင့် Development များမည်သို့ ကောင်းမွန်သနည်း CASE Tools များသုံးစွဲခြင်းကြောင့် မည်သို့သော အကျိုးအပြစ်များရှိသနည်း စသောခေါင်းစဉ် တိတိကျကျများကို အတွေ့အကြုံအခြေခံ၍ဖြစ်စေ ဖတ်ရှု့ဖူးသော အကြောင်းအရာများ အခြေခံ၍ဖြစ်စေ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးရန်။
၃) ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမည့်လူတစ်ဦး ခေါင်းစဉ်အလိုက်ရွေးခြယ်ရန် ဖြစ်နိုင်လျင်အလှည့်ကျတာဝန်ယူရန်
၄) ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူ မည်သူများ ဆွေးနွေးမည်ကို စာရင်းပေးရန်
၅) ဆွေးနွေးချိန်ပမာဏနှင့် အကြိမ်အရေအတွက်သတ်မှတ်ရန် ( ဥပမာ- တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် တစ်လတစ်ကြိမ် ဆွေနွေးချိန် ၁ နာရီ ၂ နာရီ)
၆) ဟောပြောပွဲမဟုတ်ပဲ ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်သည့်အတွက် ဆွေးနွေးမည့်သူများမှာ အကြောင်းအရာနှင့်ပါတ်သက်ပြီး အခြေခံအကြောင်းအရာများ သိရှိပြီးဖြစ်သည်ဟု ယူဆရန်
၇) ဆွေးနွေးမည့်လူများသည် သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်ကို သေချာစွာနားလည်သူ ဖြစ်ရန်မလိုပါ သို့သော် ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီ မိမိကိုယ်တိုင် နားလည်အောင်ကြိုးစားရန် တာဝန်ရှိသည်
ဂ) ခေါင်းစဉ်အလိုက် စာရင်းပေးထားသော လူတိုင်းဆွေးနွေးရန်တာဝန်ရှိသည်
၉) နားထောင်မည့်လူများ တိုက်ရိုက်နားထောင်နိုင်ရန် မည်သို့ပြုလုပ်လျင်ကောင်းမည်နည်း
ဘာတွေထပ်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုဦးမယ်မသိပါဘူး လုပ်နိုင်ရင်တော့ ကောင်းနိုင်မယ်ထင်တာပဲ လုပ်တာမလုပ်တာကတော့ အမာခံလူအရေအတွက်အပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ရည်ရှည်လုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ဆိုတာကလည်း လုပ်မယ့်လူတွေအပေါ်ရယ် အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ပုံမှန်မလုပ်နိုင်လည်း အကြိမ်အရေအတွက်ကို ခြားလိုက်ရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်စေ စာဖတ်မည် လေကန်မည်ဆိုတော့ အမာခံလူများအလိုရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများ စာရင်းပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ မည်သူမဆိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရန်လည်း တိုက်တွန်းပါသည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အများနားလည်အောင် ဟောပြောခြင်းမဟုတ်သလို အပါတ်စဉ်အမေးအဖြေ တိုက်ရိုက်အစီအစဉ်လည်းမဟုတ်ပါ။ သတ်မှတ်ထားသော အကြောင်းအရာတစ်ခုကို မိမိကိုယ်တိုင်လေ့လာ၍ သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင် အပြန်အလှန်ဖလှယ်ကာ ဆွေးနွေးရန်အစီအစဉ်အဖြစ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ တွက်ရေးကတော့ စက်သူဌေးပဲ လုပ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်တော့ အင်အားကြည့်ရမှာပဲ
ok... add me for web development and PHP အဲဒီနှစ်ခုအတွက်ဆို အမာခံပဲ။ အရင်ဆုံး ခေါင်းစဉ်လေး ရွေးရအောင်။ အပတ်စဉ် Saturday ည ဘက်ပေါ့။ Sunday ရုံးပိတ်တော့ ၁ ညလုံး အားပါးတရ ပြောလို့ရတယ်။
သူများတွေကလည်း ကိုယ့်မျက်နှာလေး မမြင်ရ၊ ကိုယ်ကလည်းတခြားလူတွေ မျက်ခွက်ကြီး မမြင်ရနဲ့ နည်းနည်းတော့ feel ကွေးမှာပေါ့။ :D
Networking, Linux အကြောင်းလေးများဆို စိတ်၀င်စားပါတယ်။
ဘယ်နှယ့် Conference လည်း မဟုတ်ဘူး တစ်ယောက်တည်း ဒိုင်ခံပြောပြီးမှ ကျန်တဲ့လူတွေ လျောက်မေးတဲ့ ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး တစ်ယောက်တစ်လှည့် အပြန်အလှန် လေကန်ပြီးပြောရမှာ။ သောကြာည စကားဝိုင်း အဲလေ ဟုတ်ပါဘူး စနေညစကားဝိုင်း။ လူမျက်နှာတွေကတော့ မြင်ချင်မနေပါနဲ့ မိန်းကလေးလည်း ပါချင်မှပါမှာပါ ပါလာရင်တော့ တစ်မျိုးထပ်စဉ်းစားကြတာပေါ့ :P
လူနှစ်ယောက်တော့ စာရင်းရပြီ။ ဆရာသမားနှစ်ယောက် အဲဒီ့ခေါင်းစဉ်ပဲ ပြောချင်လို့တော့မရဘူး တစ်ခုတော့ရှိတယ် အဲဒီ့ခေါင်းစဉ်တွေအောက် ရောက်လာရင်တော့ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့တာဝန်ကို ယူရမယ် ကျန်တဲ့ခေါင်းစဉ်ဆိုလည်း စာဖတ်ပြီးဝင်ပြောရမယ်ခင်ဗျ မဟုတ်ရင် ခေါင်းစဉ်အလိုက် Software Engineering သမား ၃-၄ ယောက် Networking သမား ၃-၄ ယောက် စသည်ဖြင့်လိုနေလောက်တယ် အဲဒါမျိုးကျ သိပ်မကိုက်ဘူး။ ဘာလာလာဝင်ပြောရမှာပဲဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေဆိုပိုကောင်း။ ကိုယ်ပြောတာမှားသွားလည်း ပြဿနာမှမဟုတ်တာ အများရှိနေတာပဲ မှားနေတာပြောလိမ့်မပေါ့။
ကျွန်တော် emo ကိုမေးထားတယ်။ emo အဆင်ပြေရင် CMS အကြောင်း ပြောဖို့ ချိန်းထားတယ်။ သူ့ ဆီက reply လာရင်တော့ CMS အကြောင်းလေးနဲ့ စဖို့ စဉ်းစားနေသည်။
ကျွန်တောှတို ့ကတော့ ဘာမှဆွေးနွေးနိုင်မှာတော့ ဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမယ့် လူကြီးတွေပြောတာကို နားထောင်တော့ ဗဟုသုတ ပိုတိုးမယ်ထင်လို ့ပါ။
နားထောင်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တောှတို ့လိုကလေးတွေအတွက် တစ်နေရာလောက်
ကျွန်တောှအကြံပေးတာလေးကို လူကြီးများမှ စဉ်းစားပေးစေလိုပါတယ်:106:
ကျွန်တောှက Web အကြောင်းကိုတောှတောှလေးကို အားသန်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ကျွန်တောှဆီမှာက သင်ပေးမယ့်လူမရှိသေးဘူးလေ
ဒာမှမဟုတ် online Discussion ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမတုန်း
ဖုန်းနဲ့ပဲ Conferencing call လုပ်လိုက်မလား..
ခု MMTIP က ကိုချစ်တို့ ကိုထွန်းတို့က အဲလိုလုပ်တာတွေ့လို့ ပြောပာတယ်..
skype နဲ့လည်း ရမယ်ထင်တယ်ဗျ..
How do I startaVideo Conference
အရင်ဆုံး က အဲဒီ conferencing call number ကို skype ကို အရင်ခောှ ပြီးတော့ ပြောကြပော့..
ကောှနက်ရှင်ကတော့ ကျွန်တောှ့အတွက်က အဆင်ပြေတယ်.. ကျန်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေကတော့ မပြောတတ်ဘူးပဲ
ကျနောှ ကိုထွန်းသူရသက်ကို မေးထားတယ်..
နောက် ပြောမယ့်သူတွေက ကျွန်တောှ ခောှပေးလို့ရတယ်
ကိုသက်ထွေး , ကိုအောင်ကျောှထက်, ကိုငွေထွန်း, ကိုရာဗီ, ကိုမြင့်ကျောှသူ စသ ဖြင်ပော့
သူတို့ကိုလည်း တစ်ချက် propose လုပ်ထားလိုက်မယ်..
မှားနေပြီ မောင်ပြုံး ပြောမယ့်လူမလိုပါဘူး လိုချင်တာက တတ်ပြီးသားလူပါလာတာကို သိပ်မကြိုက်ဘူး ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို စုပြီးလေ့လာရမှာ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်းမှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် နားလည်အောင်ကြိုးစားပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မှာ ကိုယ်ဘယ်လောက်လေ့လာထားတယ်ဆိုတာကို အချင်းချင်းဆွေးနွေးရမှာ ဒီတော့မှသူနားလည်တာနဲ့ ကိုယ်နားလည်တာ လွဲနေရင်အချင်းချင်း ပြန်ဆွေးနွေးရမှာ။ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမယ့်လူ လိုတယ်ဆိုတာက လုံးဝမသိတဲ့လူတွေ ဖြစ်နေရင် ညှိပေးလို့ရအောင်လိုတာ အဲဒီလူဟာမေးခွန်းပဲမေးမှာ မလိုရင်ဝင်မပြောပါဘူး။ ဘာမှ အသံနဲ့ပြောစရာမလိုဘူး ပြောသမျှကိုလိုက်ပြီး စာလည်းဘယ်သူမှ ရိုက်ပေးရအောင်မအားဘူး Group Chat ဆိုရင်လုံလောက်တယ် စာရိုက်ပြီးသားပဲ ကိုယ်ပြောမယ့်စကား ကိုယ်တာဝန်ယူရိုက်ခိုင်းတဲ့သဘောပဲ။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ဖိတ်ပြီးပြောဖို့မရည်ရွယ်ဘူး လာပြောတာကို နားထောင်ခိုင်းတာလဲမဟုတ်ဘူး။ လူတစ်ဦးချင်း ပြောနိုင်စွမ်းတက်လာအောင်ရယ် လေ့လာနိုင်စွမ်းတက်လာအောင်ရယ် လိုချင်တာ။ ဒါ့ကြောင့် တတ်တဲ့သိတဲ့လူတွေကို ရှာနေတာမဟုတ်ဘူး ငါစာဖတ်ပြီး ပြောရဲတယ် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ဆွေးနွေးနိုင်အောင် လေ့လာရဲတယ်ဆိုတဲ့ လူငယ်တွေပဲလိုချင်တယ်။ ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကို သိတဲ့လူက အထဲမှာမရှိရင် အဲဒီ့နေ့မှာ ကျွမး်ကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့ လူအနေနဲ့လိုတာတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နို့ သိမှ သိပဲကိုး :d
ကလေးလူကြီးမရှိပါဘူး ကိုယ့်ဟာကိုယ်လေ့လာမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ရင်စာရင်းပေးပါ ခေါင်းစဉ်အလိုက်စာဖတ်ပါ ဆွေးနွေးမယ့်နေ့မှာ ကိုယ်လေ့လာထားသလောက် ဝင်ဆွေးနွေးပါ။ ပြောသမျှမှန်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး မှားပြောမိလို့ သိတဲ့လူက ဘာ့ကြောင့်မှားတယ်ဆိုပြီး ထောက်ပြရင် ပိုနားလည်ပါလိမ့်မယ် ဘယ်သူမှမှားပြောလို့အပြစ်မတင်ပါဘူး ဝင်ပြောတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်။ နားထောင်ရုံနဲ့တော့ ဘာမှအကျိုးမထူးပါဘူး။ မြောက်ပေးလိုက်ဦးမယ် ဟိဟိ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့သတ္တိရှိရင် စာရင်းသွင်းပါ မည်သူမဆိုလက်ခံပါသည်။
မသိတာထက် နင်စာရင်းမသွင်းဘူးလား ဘာလုပ်နေသလဲ။ စာရင်းရတဲ့လူနည်းနေလို့ စိတ်ညစ်နေတယ်နော် :d
အချိန်က ဘယ်တော့လဲဗျ.. စနေ ၊ တနဂဿငနွေ ဆိုရင်က သိပ်မသေချာဘူး
စာသင်ပေးဖို့ တစ်ခုရှိနေလို့ လုပ်ပေးမယ်ပြောပြီး မလုပ်တာတွေ စထားတဲ့ဟာတွေက မနည်းဘူးဗျ..
လူတစ်ဦးချင်း ပြောနိုင်စွမ်းတက်လာအောင်ရယ် လေ့လာနိုင်စွမ်းတက်လာအောင်ရယ် လိုချင်တာ။ ဒါ့ကြောင့် တတ်တဲ့သိတဲ့လူတွေကို ရှာနေတာမဟုတ်ဘူး ငါစာဖတ်ပြီး ပြောရဲတယ် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ဆွေးနွေးနိုင်အောင် လေ့လာရဲတယ်ဆိုတဲ့ လူငယ်တွေပဲလိုချင်တယ်။
:6: အဲဒီလိုဆိုရင် အနော်လည်းပါ၀င်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် .....
ok... Add me for web development and php အဲဒီနှစ်ခုအတွက်ဆို အမာခံပဲ။ အရင်ဆုံး ခေါင်းစဉ်လေး ရွေးရအောင်။ အပတ်စဉ် saturday ည ဘက်ပေါ့။ sunday ရုံးပိတ်တော့ ၁ ညလုံး အားပါးတရ ပြောလို့ရတယ်။:D
အနော် အလုပ်က စနေ၊တနင်္ဂနွေတွေမှာ ဆို ပိုအလုပ်ရှုပ်တတ်ပါတယ်။ :18: အဲဒါကြောင့် စနေနေ့ ညဘက်ဆို ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ (
ဗျို့ လပက ... ကျွန်တော်တို့ wave ရအောင်လေ.. wave account ရှိလား.. စလုံးကဆိုရင်တော့ wave က အဆင်ပြေတယ်.. မြန်မာမှာဆိုရင်တော့ ရေရေလည်လည်နှေးတယ်တဲ့ဗျ..
wave account ကရသွားပြီလေ ခက်တာက လူစုံရင် အဲဒါမရှိတာနဲ့ကို ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး Group Chat လုပ်လို့ရတဲ့နေရာပဲ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြောစရာနေရာ စဉ်းစားကြဦးစို့လေ။
Wave account က လိုချင်သလောက်ရတယ် ကျနောှ့မှာလည်း အင်ဗိုက်တွေရှိတယ်.. အသိတွေမှာလည်း ရှိတယ်..
လိုချင်တဲ့သူတွေ (ပာမယ့်သူတွေမှာ မရှိရင်) request လုပ်လို့ရတယ်..
ခု .. ခက်တာက connection ရယ် စက်ရယ်.. ညဘက်ရောက်ရင် ကောှနက်ရှင်က မြန်တယ်.. ဒာပေမဲ့ Ajax ကို browser က သိပ်ပြီး handle မလုပ်နိုင်တော့ စာရိုက်ရင်က ထစ်ထစ်နေတယ်.. နောက်ဆုံး not responding ဖြစ်သွားတဲ့အထိပဲ :S
မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ဒီလိုပဲ.. အဲ နောက်ဆုံး Group chat လုပ်လို့ရမယ့်ဟာက Gtalk မှာ partychat ဆိုတာတော့ ရှိတယ် ကျနောှတို့အရင်တုန်းက လုပ်တာလေ.. အဲမှာ room တစ်ခုလုပ် ကိုယ့်လူတွေချည်းပဲ ပြောကြ အဲလိုဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေကောင်းပာရဲ့........
jaconda လေး နဲ့ဆိုရင်ကောင်းဘူးလား.. စာရင်းပေးထားတဲ့သူတွေကို ထည့်ပေးထားလိုက်ပေါ့...
မအားလို့ မတက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ ဆွေးနွေးထားတာတွေကို ပြန်ဖတ်လို့ရတာပေါ့ ..
party chat ကို သုံးဘူးတယ်။ အဆင်မပြေဘူး။ ၅ ယောက်ထပ်ပိုပြီး မခံနိုင်ဘူး။ ၅ ယောက်ကျော်သွားရရင် အရမ်းကြာကုန်ရော။ jaconda လေးတော့ မစမ်းဘူးဖူး။
ခါတိုင်းအစည်းအဝေး လုပ်တဲ့နေရာမှာရော ပြောသာပြောတယ် လိပ်စာတောင် မမှတ်မိတော့ဘူးစေတန် :d အဲဒီ့မှာလည်း ပြောလို့ရမယ်မဟုတ်လား
အဲ.. Wave နဲ့ အဆင်ပြေရင် Wave နဲ့ပဲ လုပ်လိုက်မလား.. ကျနောှက နောက် ၆ ယောက် အင်ဗိ်ုက်ရှိတယ်...
အချိန်ရယ်နေ့ရက်ရယ် ပြောမယ့်သူတွေရယ် verify လုပ်လိုက်မလား
ခာတိုင်း က လုပ်မှ လုပ်ပဲ :P ( ပောှကုန်ပဟ lol )
google group မှာ ပြောတာမဟုတ်လား
I think waving is best for us..:D
I think Wave is not very good for us..
Let me talk for reasons
First, "Connection" .. to get full structure UI of Wave.. we have to wait too long with MM connection ..
Then, we should care of its loading.. as I notice, when many ppl (at least 4) collaborate each other.. it become too slow .. finally, the browser become "Not Responding" :S ...
I couldn't type myanmar yet.. that's why I've to dive in Eng
sure.... thatagood I need to search link in my chat history :P
ကျွန်တော့်မှာလည်း ရှိတယ် ... ဘယ်သူ့မှ invite မလုပ်ရသေးဘူး .. 16 ယောက်စာကျန်သေးတယ် ..
group chat ချင်ရင် IRC webchat ကတော့ တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ ။ စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့ ။ ကိုယ့်ဘာ
သာ channel ဆောက်ပြီး join လိုက်ယုံပဲ ။
ဒာမှမဟုတ်လည်း အနောှတို့ Facebook MZ မှာ Discussion ဖွင့်လိုက်ကြမလား
ကျ နော် က တော့ ပီ ချိပ် ပီ မှ ပီ ချိပ် ပီ ပဲ ..လုပ် လိုက် လေ ကောင်း လိုက် တဲ့ အစီ အဆင်....
တကယ်ကို အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါ ခင်ဗျာ အားလုံးကိုပေါ့
ဗိုလ်စေကိုလဲတောင်းပန်ပါတယ် ကျွန်တော် ခုတလော အိမ်က ကိစ္စတစ်ခုလုပ်ပေးနေရလို့ပါ . အလုပ်ကလဲ ထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့ ပိုက်ပိုက်ရဖို့အရေး .. လှုပ်ရှားပေးရတာပေါ့ . နို့မို့ဆို ကန်ချမှာဗျ ခက်တာက စနေနေ့မနက်ဆို ကျွန်တော်က ၀ါးခယ်မ ပြန်ပြန်နေရတယ် မအားတာကို နားလည်ပေးကြပါ .. cms ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ ..ပထမဆုံး ဆွေးနွေးပွဲကို တော့ ဒီ MZ မှာ အုပ်စုတောင့် ပြီး ၀င်ဆွေးနွေး နိုင်လောက်တဲ့ အမျိုးအစား နဲ့ စဆွေးနွေးတာပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်တယ် ဒါမှ လူပိုစိတ်၀င်စားမှာကိုး
hardware သမား တွေများရင် hardware ပေါ့ software သမားမှာမှ web လား programming လား နောက် PHP လား CMS လား Framework တွေအကြောင်းလား အဲဒါကို အဓိကပြောကြတာပေါ့ခင်ဗျာ
ထင်တာကတော့ MZ မှာ web သမားတွေများပြီး web မှာမှ PHP သမားများမယ်ထင်တယ် သိပ်မသိတောင် အတော်များများက တော့ PHP သိတယ်လေ အဲဒီတော့ PHP မှာမှ Framework လား CMS လား CMF လား ( MODx က CMF လေ ဟီး ) အဲဒါကို တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်
ဗိုလ်စေနဲ့ ကိုသက်ထွေးနဲ့ framework အကြောင်းပြောကြဗျာ .. ဟုတ်ဘူးလား:6:
on-line ကနေ ဆွေးနွေးပြီးထားတဲ့ chat history တွေကို Mz မှာ ပြန်တင်ပေးမှာလား ဟင်။
ညဘက်ဆိုရင် လာနားထောင်လို့ မရတော့ဘူးလေ.............
နားပဲထောင်မယ့် လူသက်သက်ကို မေးခွင့်ပေးဖို့ လက်ရှိစဉ်းစားမထားပါဘူး မေးချင်ရင်ကိုယ်တိုင်စာရင်းသွင်းပြီး မည်မျှကြိုးစားထားကြောင်း စိတ်ဝင်စားစွာလေ့လာထားကြောင်း သက်သေပြဖို့ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရန်လိုပါမည်။ ဆွေးနွေးရန် စာရင်းသွင်းထားသူများသာ အမေးအဖြေလုပ်ပါမည်။
ပါဝင်မည်ဆိုလျင် ကိုကိုဝင်းကို စာရင်းမှတ်ထားလိုက်ပါပြီ ။
ရက်လေးတစ်ချက်လောက် သတ်မှတ်လိုက်ပါလား ဘယ်နေ့လောက်စမလဲ နောက်ပြီးဘယ်ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ စမလဲတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ပေါ့။ စာဖတ်ချိန်အနည်းဆုံး တစ်ပါတ်တော့ရအောင် အချိန်ချိန်းပါ။ ရှေ့တစ်ပါတ်ထဲကို ရက်တစ်ရက်ရွေးလိုက်ပါ။
ကျွန်တော် အကြံပေးကြည့်မယ် ဆွေးနွေးမှာကို နည်းပညာကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချခြင်း ဆိုတဲ့
ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ စလိုက်ရင်ရောဗျ :39::39:
အခုခေတ်လူငယ်တွေ အင်တာနက်ကို လွဲမှားစွာ အသုံးပြုနေတာတွေတွေ့ ရတယ် ဒီလိုပဲ ကွန်ပျူတာကို
လည်းလွဲမှားစွာသုံးနေတာတွေရှိတယ်ပေါ့...အဲ့လို အဲ့လို...ဆို ဘယ်လို အသုံးပြုသင့်သလဲ ဆိုတဲ့
လမ်းညွန်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ ဆွေးနွေးတာကို စတင်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်..
အစ်ကိုကြီးတို့ discussion မလုပ်ပဲ debate လုပ်ကြပါလားဟင်။ discussion ကပျင်းစရာကြီး။ debate ကမှ ပိုပြီး စိတ်၀င်စားဖို့ကောင်းတာ။ Debate က ပိုပြီး alive ဖြစ်သလားလို့။ more powerful! more active! more challenge! ဟုတ်တယ် ဟုတ် :5: :67:
ဘယ်နှယ့် conference လည်း မဟုတ်ဘူး တစ်ယောက်တည်း ဒိုင်ခံပြောပြီးမှ ကျန်တဲ့လူတွေ လျောက်မေးတဲ့ ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး တစ်ယောက်တစ်လှည့် အပြန်အလှန် လေကန်ပြီးပြောရမှာ။ သောကြာည စကားဝိုင်း အဲလေ ဟုတ်ပါဘူး စနေညစကားဝိုင်း။ လူမျက်နှာတွေကတော့ မြင်ချင်မနေပါနဲ့ မိန်းကလေးလည်း ပါချင်မှပါမှာပါ ပါလာရင်တော့ တစ်မျိုးထပ်စဉ်းစားကြတာပေါ့
ဂလုကျို ဦးရွှေရိုးမျက်နှာကြီး မြင်ရရင်တော့ဖီးလ်သေချာပေါက်ကွေးမှာ အဟီး
ဘယ်လိုလဲဟင် ဘယ်သူမှလဲ ဆက်မဆွေးနွေးကြတော့ဘူးလား။
တကယ်လို့ ဆွေးနွေးတာ ၉း၀၀ မကျော်ခင်အချိန်ထိဆို yyk လည်းပါ၀င်ချင်ပါတယ်။ သောကြာနေ့ ည ဆို ပိုကောင်းမလားလို့။
ပြီးတော့ ဆွေးနွေးမယ့် ခေါင်းစဉ်ကို နှစ်ပါတ်လောက် ကြိုပြောတာ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ အဲဒါမှ ဒီတစ်ပါတ်ဆွေးနွေးမယ့် ခေါင်းစဉ်ကိုရပြီးသား လူတွေက နောက်တစ်ပါတ် ခေါင်းစဉ်ကို ကြိုကြည့်လို့ရတာပေါ့။ မရသေးတဲ့သူတွေလည်း အချိန်ပိုရတာပေါ့။
ဒီဟာကိုမေ့ကိုနေတာ လာအော်သွားမှ သတိရတယ် ဟိုတစ်လောက အကတိုက်နေတယ် ဒီတစ်လောက ပွဲပေါင်းစုံနဲ့ အလေလိုက်နေတယ် :d ဒီလိုလုပ် စဖြစ်သွားအောင် နောက်လာမယ့်စနေနေ့ စလိုက်ကြတာပေါ့ ထူးထူးခြားခြားဖတ်စရာမလိုတဲ့ ကိုကျိရှောင် ပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲ ပြောကြတာပေါ့ နောက်လာမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ အဲဒီ့နေ့မှလူစုံရင်ပြောကြတာပေါ့။ လူစာရင်းကတော့ ထပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပေးကြပါဦး။ ဗမာပြည်စံတော်ချိန် ၇ နာရီလောက်စလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ အချိန်အဆင်မပြေရင်ပြန်ပြောပါဦး အချိန်ကိစ္စ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နောက်ဆုံး ပြန်မပြောရင်တော့ အတည်လို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်မယ်။
နောင်လာမယ့် စနေ ကျွန်တောှ ရှိမယ်မထင်ဘူး
so.. don't count me in
btw .. ကြိုပြီး wish လုပ်ထားလိုက်မယ်ဗျာ
တိန်... ဒီတစ်ခါမှ ဦးဦးကိုဖြစ်သွားပြီဟ ဒုတိယနှစ်ကလေးက ခေါ်တာဆိုတော့ ရပါတယ်လေ အသက်ကလည်း ဦးဦးခေါ်လို့ရမယ့်အရွယ် ရောက်ပါပြီ :P
ဒုတိယနှစ်ဆိုတော့ ငယ်ပါသေးတယ် အချိန်တွေရပါသေးတယ်။ သူများထက်ပိုတတ်ချင်ရင် သူများထက်ပိုဖတ်ရမှာပေါ့ ဘာဖတ်ရမလဲမေးရင် ကျောင်းမှာသင်တဲ့စာအုပ်ပဲဖတ်ပါ အဲဒါလုံလောက်ပါတယ် သင်ရိုးစာအုပ်တွေ အကုန်လုံးကောင်းပါတယ် သင်တာတော့ သင်တဲ့လူအပေါ်မူတည်ပြီးကွာခြားမှာပေါ့လေ။ လက်တွေ့ကတော့ ကျောင်းမှာက သတ်မှတ်ချိန်အရဆိုတော့ လုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ဟာကိုလုပ်ယူပေါ့။ ဒီတော့ ငါ့တူမမှာ စာအုပ်တွေကဖတ်စရာရှိပြီးသားပဲ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိဖို့ပဲလိုတယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ်လက်တွေ့လုပ်ပေါ့။ အခုအချိန်တော့ လုပ်တွေစမ်းစရာတွေမှာ ပရိုဂရမ်းမင်းတွေ ပိုပြီးဦးစားပေးပေါ့ ဒုတိယနှစ်မှာ အရင်ကတော့ Java သင်တာပဲမဟုတ်လား သင်တဲ့စာအုပ်လေးလည်း အခုမှစလုပ်မယ့်လူအတွက် အတော်လေးကောင်းပါတယ် အခုတော့ ပြောင်းမပြောင်းမသိတော့ဘူး။ တစ်ခြား Application တွေလည်း စမ်းစရာတွေရှိတာပါပဲ။ Software ယူတဲ့လူအဖို့က ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိရင် အဆင်ပြေနေပြီပဲဟာ ဘာပူစရာလိုလို့လဲ။ စလုပ်ကာစတော့ ပင်ပန်းမယ်ပေါ့ နောက်တော့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
ဦးဦးလူပျိုကြီးရေ . . . ကျွန်တော်က မြစ်ကြီနားရုံးကနေ Internet သုံးရတဲ့သူပါ . . . ရုံးပိတ်ရက်ညတွေကျတော့ အဆင်သိပ်မပြေဘူးဗျ . . . ဆွေးနွေးပွဲထဲပါ၀င်ချင်ပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ . . . ကျွန်တော်တို့လို သူတွေအတွက်ကော မစဉ်းစားပေးတော့ဘူး ဦးဦးလူပျိုကြီးရယ် . . .
ကျွန်တော်က how to using drupal ကို